Tag: Jason Miller | Martech Zone
Had iyo jeer Xidho: 10 Istaatistikada Wadista Iibka Isbedelka
Sunday, May 29, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Kooxda Microsoft waxay diyaariyeen warqad cad oo cajiib ah oo ku saabsan caqabadaha iyo guulaha ururada iibka, wax soo saarkooda, iyo awooda la qabsiga iyo la qabsiga tikniyoolajiyadda. Waxaan badiyaa la kulannaa shirkado sameeya natiijooyinka iibka ee cajiibka ah ee ka yimaada ereyga-afka iyo wicitaanka qabow. Marnaba shaki kama lihi in labada xeeladood midkood shaqeeyaan - dabcan way shaqeeyaan. Istaraatijiyadaha iibka ee shirkado badan isma beddelin toban sano. Taasi waa nasiib daro, maxaa yeelay maxaa
Waa kuwan Talooyinka 33 LinkedIn ee ah inaad Tweet!
Jimcaha, Sebtember 26, 2014 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Ma jiraan maalmo aad u tiro badan oo aanan ka akhrinaynin cusbooneysiinta LinkedIn, la xiriirista qof ku jira LinkedIn, ka qaybgal koox koox LinkedIn, ama ku dhiirrigelinno waxyaabahayaga iyo ganacsigeenna LinkedIn. LinkedIn waa halbowle u ah ganacsigeyga - waana ku faraxsanahay casriyaynta aan ku sameeyay koontada ugu sareysa horaantii sanadkan. Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha cajiibka ah ee ka socda hoggaanka warbaahinta bulshada iyo isticmaaleyaasha LinkedIn ee ka socda webka. Hubso inaad la wadaagto